Ọrụ kacha elu: Ọnọdụ ike iji bulie arụmọrụ karịa | Akụkọ akụrụngwa
Eder Esteban | | Kọmputa
Ekele maka nyocha nke Insider nke Windows 10 anyị nwere ike ịmara ụfọdụ akụkọ nke ahụ ga-erute sistemụ arụmọrụ. Obere obere ekpughere ụfọdụ n'ime akwụkwọ akụkọ ndị a. Ugbu a, windo Windows 10 kachasị ọhụrụ wetara anyị a ọhụrụ ike mode kpọrọ Ultimate Performance. A mode mere maka ndị na-adịghị mkpa amachi arụmọrụ nke kọmputa ha.
Ebe ọ bụ na anyị na-eche ihu a Ọnọdụ ike nke na-enye anyị ohere ịwelite arụmọrụ nke kọmpụta anyị. Yabụ ọ dị ka ezigbo ọnọdụ maka ndị na-eji kọmputa arụ ọrụ. Ebe ọ bụ na n'ụzọ dị otú a ị nwere ike nweta ọtụtụ ihe site na arụmọrụ ya.
Arụ Ọrụ Kachasị ewepụ nhọrọ njikwa ike na njedebe karịa ike ngwaike A na-etinye ha n'ọrụ na arụmọrụ kachasị elu nke dị taa. Ọ bụ nhọrọ na-aga n'ihu. O doro anya, ọrụ ga-enwe ike ịhọrọ ya ọ bụ ezie na ndị nrụpụta nwekwara ike ịkwado ya ozugbo. Ọ dịkarịa ala na ọnọdụ nke ebe ọrụ ma ọ bụ akụrụngwa akọwapụtara.
Echiche Microsoft bụ na bụrụ kọmputa ndị na-enweghị ikike adịghị ike n'ihi ịnwe batrị na-arụ ọrụ kachasị arụmọrụ maka Windows 10. Nke a bụ ezigbo akụ na ụba na usoro nke ngwaike. Ya mere, ojiji ya jiri ya na usoro akụrụngwa akọwapụtara nke ọma.
Ọ bụ ọrụ a haziri nke ọma maka ebe ọrụ nwere nnukwu ibu. Ma ọ dịkarịa ala nke ahụ bụ ndị ahịa Windows 10 nke ụlọ ọrụ ahụ chere na ọ ga-erite uru site na iji ọnọdụ ike ọhụrụ a. Agbanyeghị, a na-atụ anya iru ndị ọrụ ndị ọzọ nke sistemụ arụmọrụ.
Ekele maka ụlọ ọhụụ a anyị amatala ihe dị mkpa dị ka nke a. Anyị ga-echere ruo oge opupu ihe ubi ka ọ bụrụ eziokwu. Ma, arụmọrụ kacha bụ nnukwu mgbanwe na Windows 10.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Kọmputa » Ọrụ kacha elu: Ọnọdụ ike na Windows 10 iji bulie arụmọrụ
Panasonic gosipụtara nzọ ya na telivishọn: 4K LCD LED panel na HDR10 +